How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Ukunakekela izingane uma umzali ene-COVID-19 – Messages for Mothers
Ngingayinakekela kanjani ingane yami uma ngine-COVID-19?
Abantu abane-COVID-19 kufanele bazihlukanise nabanye ukuze igciwane lingasabalali liye kwabanye. Isisebenzi sezempilo sizokutshela ukuthi kufanele uzihlukanise izinsuku ezingaki. Xoxa nabo uma kungenzeka ukuzehlukanisa ekhaya noma esikhungweni sezempilo. Ukuzihlukanisa kusho ukuhlala kude nabanye abantu futhi ungaphumi nhlobo.
Uma kukhona omunye umuntu ekhaya lakho ongakusiza (ongenayo i-COVID-19) mcele ukuthi akusize ngokunakekela izingane zakho ngangokunokwenzeka.
Uma udinga ukunakekela izingane zakho ngenkathi une-COVID-19 futhi uyazihlukanisa ekhaya:
Gwema ukuqabula izinsana nezingane ngangokunokwenzeka. Sebenzisa ukuthintana kwamehlo nokumamatheka futhi udlale imidlalo efana ne-peek-a-boo usendaweni eqhelile (amamitha angu-2 noma okungenani izihlalo ezimbili phakathi kwenu)
Faka isifihla-buso sendwangu lapho uxhumana nengane yakho. Ungabuthinti ubuso bakho.
Ungathinti amehlo noma umlomo bosana noma bengane yakho
Ungavutheli umoya ebusweni bengane yakho
Cikekela ukuba ugcina izitsha zakho zokudla, amathawula nesifihla-buso sobuso zihlukile kwezabantwana bakho futhi uzigeze ngokuhlukile kulezo zomndeni wonke.
Ngemva kokukhwehlela nokuthimulela ethishwini noma endololwaneni, lahla ithishu. Geza izandla ngokushesha ngensipho namanzi imizuzwana engama-20
Geza noma uhlanzisise izandla zakho ngaphambi nangemva kokuthinta noma yini okungeyengane (njengethoyizi). .
Geza izandla zakho ngensipho namanzi imizuzwana engama-20 ngaphambi kokulungiselela ukudla noma ukondla izingane zakho
Sula yonke indawo yokulungiselela ukudla ngensipho namanzi noma ngamanzi asombululwe ne-bleach. Gcina i-bleach lapho izingane zingeke zifinyelele khona. Ingaba nobuthi obukhulu.
Ezinganeni ezingaphezu kwezinyanga ezingu-6, lungiselela ukudla kusengaphambili ukondla ingane yakho okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku
Ezinganeni ezindala, zama ukulungiselela ukudla ukuze kube nokudla okutholakalayo okungenani kathathu ngosuku
← What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ukubonakalisa izimpawu zokugula → What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Izingane ezixhumana nomuntu one-COVID-19